ဒန်ဘရောင်းသည်စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၇ တွင်ထုတ်ဝေရန်မူလအဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည် eReaders အားလုံး
ဒန်ဘရောင်းသည်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအဆိုပြုသည့် Da Vinci Code ဟုခေါ်သောစာအုပ်ဖြင့်လူသိများခဲ့သည် ယရှေုခရစျ၏ဖြစ်နိုင်သောဆက်ဆံရေးကြံစည် မာရီယာနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောဇာတ်ကားဖြစ်သော်လည်းသံသယအမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်မျက်နှာပြင်ကြီးသို့သွားရန်အရောင်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။
ယခုရေးသားသူသည်ကြေငြာလိုက်သည် instagram အပေါ်စာအုပ်အသစ် နှင့်ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်ကျွမ်းကျင်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်သောစာအုပ်အဖုံး။ ၎င်းကိုသင့်တော်သောစစ်ထုတ်စက်များဖြင့်ကြည့်လျှင်၎င်းကိုတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌စုံထောက်တစ်ယောက်ရှိလျှင်၎င်းကိုဖြတ်သန်းရန်နှောင့်နှေးမသွားပါစေနှင့်။ Instagram အကောင့်.
ဘရောင်းဆွဲနိုင်ခဲ့သည် သင့်ရဲ့စာအုပ်တွေမှအများကြီးအကျိုး ဒုတိယနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည့် Da Vinci Code၊ Angels နှင့် Demons တို့နှင့်တတိယ၊ Inferno နှင့်အတူ။ သူ၏စာအုပ်များကိုရောင်းရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအားကိုးသောစာရေးဆရာများရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့နီးပါးရှိနေပြီးသူသည်သူ၏နောက်စာအုပ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်အတွက်အလွန်တိကျသောနည်းလမ်းဖြင့်ယခုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
ငါတို့နီးပါးကပြောတယ် ဒီ Saga ၏စတုတ္ထခေါင်းစဉ်Robert Langdon သည်မူလအစသို့ပြန်သွားသောအခါ
မူလကဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ Iconology နှင့် Symbology ပါမောက္ခ Langdom ကိုသူတို့တွေ့သည့်နေရာသည်အန္တရာယ်ရှိသောလမ်းဆုံသို့ပို့ဆောင်သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကိုနားလည်ရန်အဓိကမေးခွန်းများ၎င်းနှင့်ထိုအရာကိုဖော်ထုတ်ရန်ကျန်ရှိနေသေးပြီး၎င်းတို့အားဖြေကြားမည့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုလည်းဖြစ်သည်။ "
ဤရွေ့ကား Doubleday ကြေညာသူများ၏ကိုယ်ပိုင်စကားများဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိ United States နှင့် Transworld ၌ဝတ္ထု၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်စုတစ်ခုတွင်ပေးခဲ့သော နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ Langdon သည်ယခင်ကဖြေရှင်းခဲ့သည်
ဒန်ဘရောင်းသည်စာအုပ်ပေါင်းသန်း ၂၀၀ ကျော်ရောင်းချပြီးဖြစ်ပြီး၊ အချိန်တိုင်းတွင်မူလနှင့်အတူအရောင်းရဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိလိမ့်မည် စက်တင်ဘာလ 2017 ထုတ်ဝေခဲ့သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » ဒန်ဘရောင်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် Origins ဟုခေါ်သော e-book အသစ်တစ်ခုအတွက်အဆင်သင့်ရှိသည်
ကောင်းကင်တမန်များနှင့်နတ်ဆိုးများသည် Da Vinci ကုဒ်ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ ပြီးတော့ The Lost Symbol, Saga မှာတတိယမြောက်ဝတ္ထုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဒီမူလသည်စတုတ္ထမဟုတ်ဘဲပဉ္စမဖြစ်သည်။
José Ignacio ကိုပြန်ပြောပါ
၎င်းသည်ကောင်းကင်တမန်များနှင့်နတ်ဆိုးများကိုမေ့ပျောက်ခဲ့သည်မှာမှန်သော်လည်း Da Vinci Code အရှုပ်တော်ပုံပြီးနောက်၎င်းကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုမူရင်း၌ Langdon သည်“ Rosicrucians” ၏အမိန့်နှင့်ပတ်သက်သောနက်နဲသောအရာတခုကိုသူဖြေရှင်းရန်လိုသည်။ သူသည်ထိုပြ...နာကိုဖြေရှင်းရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြသခဲ့သည်။ !! ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
အများအားဖြင့်ယခုမူရင်း၌ Langdon သည်“ Rosicrucians” ၏အမိန့်နှင့်ပတ်သက်သောနက်နဲသောအရာတခုကိုဖော်ထုတ်ရန်လိုလိမ့်မည်၊
ဂူဂဲလ်သည်၎င်း၏ Artificial Intelligence ၏စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုတိုးတက်စေရန် ebook များအသုံးပြုသည်